Diyaarado dagaal oo duqeeyay Fariisin Al-Shabaab ku leeyihiin Deegaan ka mid ah Gobolka Sh/ Hoose – Balcad.com Teyteyleey
Wararka aan ka helayno Gobolka Sh/Hoose ayaa sheegaya in Diyaarado Dagaal ay duqeyeen Degaan u dhow Degmada Baraawe ee Gobolka Shabellaha Hoose, iyadoo deegaankaasi la sheegayo inay Fariisin ku lahaayeen Al-Shabaab.
Aadan Cumar Madoobe Guddoomiyaha Degmada Baraawe ayaa sheegay in Diyaarado Dagaal nooca kuwa Duuliye la’aanta ah ay duqeyeen saldhig Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaan ku dhow Degmada Baraawe, wuxxuuna sheegay Gudoomiyaha in la burburiyay Gawaari Dagaal oo ay Al-Shabaab halkaas ku haysteen.
Dhanka kale khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ayaan ilaa iyo hadda la ogayn, iyadoo sidoo kale aysan jirin cid sheegatay Duqayntaasi, inkastoo warar aan la xaqiijin ay sheegayaan inay gaysteen ciidamo Marakan ah.
The post Diyaarado dagaal oo duqeeyay Fariisin Al-Shabaab ku leeyihiin Deegaan ka mid ah Gobolka Sh/ Hoose appeared first on Ilwareed Online.
Madaxweyne Xaaf oo Xaalad Deg Deg ah ku soo rogay Degaanada Galmudug =Wareegto uu soo saaray=